EMUI 9.1 waxaa loo sii deyn doonaa 18 telefoonada Huawei toddobaadyadan | Androidsis
Huawei wuxuu shaaca ka qaaday taleefannada ay cusbooneysiin doonaan EMUI 9.1
EMUI waa lakabka qaabeynta ee taleefannada Huawei iyo Honor. Xilligan waxaa jira qiyaastii 470 milyan oo isticmaale kuwaas oo u adeegsada lakabkan taleefannadooda, sidaas darteed waxay si muuqata ugu dhex jirtaa suuqa. Shirkadda ayaa gaysay qaybteeda cusub dhowr toddobaad, EMUI 9.1, kaas oo horey u gaadhay taleefannada qaarkood. Calaamadda ayaa hadda noo reebtay liiska taleefannada cusub ee dhowaan yeelan doona.
Shirkadda Huawei ayaa shaaca ka qaaday liiska 18 taleefan oo yeelan doona EMUI 9.1 dhowaan. Dhammaan taleefannadan ayaa la cusbooneysiin doonaa xagaagan, maaddaama nooca Shiinaha horay loogu xaqiijiyay si rasmi ah. Marka cusbooneysiintan ayaa muhiim u ah isticmaaleyaal badan. Telefoonada sharafta leh lama sheego xilligan.
Dhammaan taleefannada ku jira liiskan waa moodooyinka Huawei, markaa ma naqaanno goorta ay jiri doonaan warar la mid ah moodooyinka Maamuusta. Laakiin ugu yaraan isticmaaleyaal badani waxay awoodi doonaan inay horeyba u ogaadaan taariikhda ay marin u heli doonaan EMUI 9.1 si rasmi ah. Laga bilaabo Juun 27 waxaa jira afar taleefan yaase yeelanaya: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X iyo Huawei 20 RS Porsche Design.
Halka inta kale ee taleefannada liistada sugi doonaan in yar ka dheer. Xaaladdaada, cusbooneysiinta waxaa la sii deyn doonaa inta lagu jiro bisha Luulyo, sida ay xaqiijisay shirkadda. Telefoonada la cusbooneysiinayo waa: Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 RS Porsche Design, Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro, Huawei Y9 2019, Huawei Y6 2019, Huawei Y5 2019 , Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i, Huawei Nova 3e iyo Huawei Nova 4.
EMUI 9.1 ayaa noqon doonta nooc diiradda saaray gaar ahaan waxqabadka. Sida la ogsoon yahay, waxay soo bandhigi doontaa waxqabad horumarineed oo gaari kara 60% xamuulka codsiyada-saddexaad. Sidaa darteed, waxaan filan karnaa waxqabad aad ufiican oo ku saabsan arjiga markasta habkan.
Sidoo kale waa inuu jiraa xoogaa isbeddelo qurxin ah EMUI 9.1. In kasta oo ay umuuqato inay noqon doonaan waxyar oo isbeddel ah xaalad kasta, haddana runti ma noqon doonaan wax cusub oo muhiimad u leh dadka isticmaala taleefannadan. Isticmaalayaasha taleefankoodu liiska ku jiro, waxa kaliya oo hadhsan inay sugaan xoogaa furitaankiisa
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei wuxuu shaaca ka qaaday taleefannada ay cusbooneysiin doonaan EMUI 9.1
Sida looga hortago Smart Lock inuu xasuusto furahaaga sirta ah
Galaxy S10 5G waa kan ugu iibsiga badan Koonfurta Kuuriya